Archive du 20191106
Fitondrana Rajoelina Hiaraka amin’ny tatsinanana ?
Tonga nitsena ny delegasiona sinoa izay notarihin'ny praiminisitra lefitra misahana ny filankevi-panjakan'ny Repobika entim-bahoakan'i Chine,
Kaominina Alasora “Maro ny asa vita saingy tsy ampy”
Tamin`ny alalan’ny fotoam-bavaka no nisantaran’ny antoko Tiako I Madagasikara ny fampielezan-kevitra izay nandrotsaka an`i Jimmy Randriantsoa ho kandidà ben`ny tanàna ao amin`ny kaominina Alasora.
Marathon de Tanà andiany faha-19 Nahemotra amin’ny alahady 17 novambra izao
Nambaran’ireo mpikarakara (Fma sy Vima ary ny Eau Vive niaraka tamin’ny Telma),
Samy tia tanindrazana
Somary nangatsiatsiaka ny andro voalohan’ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolontsain’ny tanàna raha ny hita omaly.
Zotra rezionaly sy nasionaly 15 kg isan’olona ihany sisa ny entana azo entina
Holanjaina avokoa manomboka izao ny entana ho entin’ireo taxi-brousse ao amin’ny zotra rezionaly sy nasionaly mivoaka sy miditra ny
Mponina sy fampandrosoana Hiatrika fivoriam-be any Nairobi ny tanora Malagasy
Hisy ny fihaonana an-tampony hotanterahina any Nairobi-Kenya amin’ity volana novambra ity mandritra ilay kaonferansa iraisam-pirenena mahakasika ny mponina sy ny fampandrosoana (ICPD).
Antananarivo Hivaha ny 70 % n’ny olan’ny rano afaka 12 volana
Nidina ifotony nijery ireo fotodrafitrasa fanatsarana ny famatsian-drano eto Antananarivo ny minisitry ny Angovo, ny Rano ary ny Akoran’afo, mpisolo toerana,
Saram-pisoratana - EPP Ilay 4.000 na 5.000 Ar isaky ny ankizy no nofoanana
Niteraka resabe teto amintsika mihitsy efa ho tapa-bolana izao ny fisian’ilay fanambarana nataon’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Rtoa Volahaingo Marie Therese
Fitrandrahana an-tsokosoko any Ikalamavony Sarona ny Béryllium sy tourmaline an-jatony kilao
Béryllium 188 blocs no saron’ny zandarimariam-pirenena amin’ny faritra Matsiatra ambony sy tourmaline 118 kg.
Asan-jiolahy tany Mampikony Voasoroka ny fitsaram-bahoaka
Nifanarahan'ireo mpividy efa-dahy izay jiolahy mitam-basy sy ny mpivarotra fa tsy aloa ny vidin'omby 6 raha tsy vita ny taratasy.